Clenbuterol (CLEN) budada HCL (21898-19-1) hplc = 98% | AASraw
Kiniiniga Clenbuterol hydrochloride
/ Products / Xabbad dufan leh / Clenbuterol (CLEN) budada HCL
Category: Xabbad dufan leh Tags: Duufaan hCl, Budada budada ah, duufanoolada HCL, Kiniiniga Clenbuterol hydrochloride, budada clenbuterol
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saarka iyo wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xakamaynta Clenbuterol (clen) budada HCL (21898-19-1), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka kantaroolka tayada la socon karo.
Clinbuterol (CLEN) HCL video budada
|.Nooca Clinbuterol (CLEN) budada HCL Calaamadaha aasaasiga ah:
Name: Clinbuterol (CLEN) budada HCL
Nooca Molecular: C12H19C3N2O
Miisaankani waa: 313.65
Dhibcaha Biyaha: 174-175.5 ° C
Kaydinta Nabadgelyada: 2-8ºC
Isticmaalidda Kiniiniga Isticmaalidda HCL (CLEN) ee HCL ee wareegga steroids
Clinbuterol hydrochloride (CAS 21898-19-1) sida caadiga ah waxaa lagu magacaabaa Clen, Clen HCL, oo ​​ay sameeyaan kuwa jidhka sameeya ama kuwa lumiya.
2. Isticmaalka budada HCL ee Isticmaalka Qalabbuterol HCL:
Clinbuterol hydrochloride waxay leedahay awood xoog leh oo gubanaysa. Waxa kale oo uu leeyahay saameyn heerkul aad u fara badan (oo kor u qaadaya jidhka). Gowrku wuxuu kordhiyaa cadaadiska dhiigga wuxuuna wadnuhu ka dhigaa mid adag. Kicintaasi waxay keenaysaa kororka heerkulka jidhka. Sida laga soo xigtay xogta, waxay sidoo kale keentaa glycogenolysis (burburinta glycogen), taas oo ah sababta ay u caawineyso gubista dufanka jirka.
3. Digniin ku saabsan budada HCL ee Clenbuterol:
4. Talooyin dheeraad ah oo ku saabsan budada HCL Clenbuterol HCL:
Suuqa, waxaa jira qeylo badan oo been abuur ah, oo ah Salbutamol caadi ahaan.
Haddii aad haysatid sharciga Clenbuterol waxaad u baahan tahay inaad qaadato heerkulkaaga. Ka hor inta aadan billaabin wareegga Qalabka, waxaad qaadataa heerkulkaaga subaxda kadibna markaad ku jirto Clen mar kale qaado.
Haddii ay tahay heshiiska dhabta ah waxaad arki doontaa kor u kaca heerkulka jidhka. Waa inaad sidoo kale la kulantaa ruxashada gacanta iyo garaaca wadnaha oo aad u dhakhso badan. Qaar ka mid ah ma dareemayo waxyeelada ku saabsan qiyaasaha hoose, markaa qaadashada qiyaasta iyo arag waxa dhacaya. Haddii wax kuwan ka mid ahi dhacaan xitaa haddii aad ku jirto xaddiga 80-100mcg, ka dibna waad iska garaacday.
5. Nadiifinta huurka Clinbuterol HCL (CAS 21898-19-1):
Qeybta "Clen" ee caadi ahaan loo isticmaalo waa salbutamol, oo sidoo kale loo yaqaan albutamol. Inta badan kala duwanaanshahoodu waa qiyaasta. Clen waa at 40mcg iyo salbutamol waa at 100mg. Waxaad kaliya urin kartaa budada ceyriinka oo aad ogaatid midka dhabta ah. Si loo baadho nadiifinta caafimaad, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad sameyso tijaabada HPLC.
6. Noocyada HCL HCL Rijeetooyinka:
Sameynta mareeyaha HCL ee budada HCL at 100mcg / ml
FIIRO GAAR AH: Ku dhajinta labadan xeryood waxay noqon karaan kuwo halis ah, ha ku nuugin iyaga haddii aad dhab ahaantii ogtahay waxa aad sameyneyso, ama aad si xun ugu dhici karto. Eeg maqaalka hoose.
Dhalooyinka iyo dhibcaha (oo leh cabbiraadaha dhibcaha)
Weelka dareeraha weyn ee 12 Large (baaldi ayaa ku filan)
Sameynta 100mcg / ml Clinbuterol (Qoraalkan wuxuu u shaqeynayaa T3).
Haddii qof uu ogaado xisaab kasta oo khalad ah iima oggola inaan ogaado, laakiin waxaan u maleynayaa inaan lacagtan la joogo.
BA-du waa mid si adag u xoqaya budada iyo ilaalinta nadiifinta alaabta la nadiifiyo, i rumee inaanay jirin wax badan oo laga yaqyaqsoodo kadib markaad qaadato qiyaastaada maalinlaha ah iyo inaad ogaato in bakteeriyadu ay sameysey gumeysigaaga shinnigaaga (oo la sameeyay). Sidaas awgeed waxaanu isticmaaleynaa 1% dib-u-dhiskaan.
Qodobkani waa inuu ku beddelo weelka 1 ee budada (haddii xisaabtaydu sax tahay waxay samayn doontaa qiyaasta 10,000).
Biyaha Biyaha Leh = 9.9 Liters (9,900 mL). Haa waa litir, taas oo aan ahayn qalad ah, mar labaad waxay taasi la micno tahay in xisaabtaydu sax tahay.)
Tallaabada 1. Ku rid suunka Tyvek. Badbaadadu waa shardi ah Clenbuterol.
Tallaabada 2. Ku rid maaskarada sawirrada.
Tallaabada 3. Geli gacno gashi. Ku xirashada suumanka waa ikhtiyaari.
Tallaabada 4. Cabbirta budada leh miisaan. Waxaad rabtaa 100% hubin ujeedooyinka qiyaasta.
Tallaabada 5. Ku dar budo si aad u xajiso.
Tallaabada 6. Ku dar baastar si aad u milmo.
Tallaabada 7. Biyaha ku rid weel wayn.
Tallaabada 8. Ku dar qasacad biyo ah si aad u fiican isku dar.
Tallaabada 9. Ku rid dhalooyinka iyo ku dar sare.
Waxyaabaha ugu dambeeyay waa in ay noqdaan laydh 10 of Clen at 100mcg / ml.
Cuntadan waxaa loogu talagalay ujeedooyin madadaalo ah oo aan la isku dayin. Kuwani waa kiimiko khatar ah. Sidoo kale waa aragti oo aan lagu dhaqmin ficil ahaan.
-IMO waxaa jira hal hab oo loo sameeyo sidan ka hor intaanad sameynin walxahan baaldiyada ... aad u fudud ...
- hal-cabbir hal-cabbir ah 0.2g (haa tahay qaybta jajabka ee gram, waxaad akhrineysaa midig)
-majin 200mls ah oo aan walwal gelin saxanka isku dhafan ee nooc ka mid ah, ama xayawaan
-Kulalka 0.2g ee budada qallafsan, oo codso kuleylka hoose ... Tani waa mid aad u sahlan in la daweeyo sidaa daraadeedna u dulqaadan kartid.
-waxaa ka dambeeya xakameynteeda ku shub qandhada qashinka lagu shubo weel waxoogaa ah.
-waxaad ku dari kartaa 800ml ee biyaha la fogeeyey ...
-BAM! ... waxaad leedahay 1000ml ee hannaanka dareeraha @ 200mcg / ml
- soo qaado oo buuxi weelasha 50ml ama 100ml iyo waxqabadkaaga.
Kiniinnada kiniiniga HCL ee kiniiniga ah-20mcg
Clinbuterol Hydrochloride 0.02mg
Magnesium dhala 1mg
Tilmaamaha soo saarista:
1. Isku qas dhammaan walxaha ku jira mashiinka Turbula, oo ku cadaadi kiniinada adigoo xajinaya 20KN.
2. Dhiirran kiniinada 100mg, adigoo isticmaalaya dhar 8mm.
7. Suuq-geynta Sheybuterol HCL Su'aal:
III. Nooca Clinbuterol (CLEN) budada HCL HNMR
IV. Sida loo iibsado kalluunka huurka Clinbuterol HCL (CAS 21898-19-1); soo iibso CLEN HCL budada laga bilaabo AASraw?
1.To nagula soo xiriir emailkayaga
nidaamka weydiinta, ama skype online
wakiil adeegga macaamiisha (CSR).
Wax kasta oo ay tahay inaad ogaato ka hor inta aadan iibsanin budada clenbuterol | AASraw Duufaanta Clenbuterol: Nadiifinta iyo nadiifinta alaabta ganacsiga Clinbuterol HCL loogu talagalay Jimicsiga Clenbuterol VS Salbutamo
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan barta muhiimka ah ,soo dhawow inaad gujiso halkan.
dib u eegis 1 waayo, Clinbuterol (CLEN) budada HCL
Falanqaynta shaybaarka: 98% baadhitaan nadiif ah !!!
Ma rumaysan karo inaan ka heli karo nadiifin sarreeya sida budada Clenbuterol ee Shiinaha. Maadaama qiimaha budada Clenbuterol uu yahay mid la aqbali karo, wuxuu tixgelin doonaa wadashaqaynta xiga.
Xabbad dufan leh (34)
Qaar kale waxay (22)
Alxheimer ee daroogada J147: A Potent Curcumin Derivative J147 Isku-darka Neurotrophic
Jürgen Weber on (MK-677 Powder) Talooyinka Ibugamoren Isticmaalidda budada
Mirco on Faa'iidooyinka ugu sareeya 5 ee isticmaalka budada Ostarine MK-2866
Dr. Patrick Young on Burburinta miisaanka ugu fiican: Budada Sibutramine (Meridia)
Lusi on Burburinta miisaanka ugu fiican: Budada Sibutramine (Meridia)
Dr. Patrick Young on Ka iibso budo badan oo Tadalafil online ah: Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato !!!